မနေ့က ရုံးပိတ်ရက် အိမ်မှာလူစုံတုန်း အိမ်က အစ်မက "ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုနေ့၊ မနက်ဖြန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ က ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့" လို့ ဆိုလိုက်တော့ အနားမှာရှိတဲ့ ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်ဖွား ညီမငယ်လေးတစ်ယောက်က "ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲ" တဲ့။
အစ်မလုပ်တဲ့သူကတော့ အဲဒီမေးခွန်းကို မေးရပါ့မလား၊ ဒါလေးတောင်မသိရကောင်းလားလို့ ရီတယ်။ ကျွန်မကတော့ ရီလည်း မရီချင်သလို မေးတဲ့သူကိုလည်း အပြစ်မတင်ချင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ဆိုတာ အရိုးထဲမှာ စွဲနေပြီးသား။ ဗိုလ်ချုပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့လည်း နာမည်တောင်ထည့်ပြောစရာမလိုပဲ ဘယ်သူ့ကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာ တန်းသိပြီးသား။ သိဆို ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲများများ ကျွန်မတို့ရင်ထဲက ဗိုလ်ချုပ်က တစ်ယောက်ထဲပေပဲကိုး....။
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျန်တာတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် မလေ့လာ မလိုက်စားမိလို့ တိတိပပ မသိရှိရင် နေပါစေ။ ကျွန်မတို့ တတိယတန်းကတည်းက နှုတ်တက်ရွရွ ရွတ်ဆိုကျက်မှတ်လာခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုတော့ သင်ဖူးတဲ့လူတိုင်း မှတ်မိနေကြသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကဗျာလေးကို မမေ့တဲ့သူတိုင်းလည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ကို မေ့မယ်မထင်ပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်း ကျောင်းတွေမှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ ပြောင်းကုန်ပြီလား၊ အဲဒီကဗျာလေးကို ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာ သင်ရသေးလား၊ မသင်ရတော့ဘူးလားလည်း မသိတော့ပါဘူး။ (ကြုံမှ မေးကြည့်ပါဦးမယ်။) ကျွန်မကတော့ အဲဒီကဗျာလေးကို ဘယ်အချိန်ထမေးမေး အမြဲအလွတ်ရနေလေ့ရှိတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ မှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ
၂၀၁၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော ကျွန်မတို့ချစ်သော ဗိုလ်ချုပ်၏ (၉၇)နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ။
Posted by အင်ကြင်းသန့် at 1:43 PM
Labels: ကဗျာ, အမှတ်တရ
ညီမတို့တုန်းကတော့ မပြောင်းဘူးအစ်မရေ၊ အခုထိကဗျာလေးကို အလွတ်ရတုန်းပဲ။ ၂၀၀၄ ဆယ်တန်းအောင်တာ။
P.S 90 နှစ်အောက်မွေးသူတိုင်းသင်ဖူးမှာပါ။ နောက်ပိုင်း ကျော်သင်တာတွေ့ ဖူးတယ်။ မိုးသင်ပေးတော့ ကျောင်းမှာမသင်ဖူးတဲ့ ရင်နာစရာ...နှစ်မမှတ်မိလို့ခုစဉ်းစားနေတာ..
ကျွန်မတို့ချစ်သော ဗိုလ်ချုပ်၏ (၉၇)နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ။
ဂျင်းလေးရော ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ....
ဗိုလ်ချုပ်ကိုမသိဘူးလို့ကြားရတာ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး။ အစ်မတို့တုံးကတော့ ကျောင်းတွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာကို အသည်းထဲစွဲနေအောင်ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ သင်ခဲ့ရတာ။
ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာ တခုတ်တရ ထပြီး ဂုဏ်ပြုစာရေးတဲ့ ငါ့ညီမကို လေးစားပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ကို သိကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ှုငယ်ငယ်က ကဗျာလေး ပြန်ဖတ်သွားတယ် ဂျင်းရေ..
မမေ့သင့် မမေ့အပ်တဲ့ ကဗျာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ဂျင်ဂျင်းရေ။
"ဥာဏ်အမြင်ကျယ်သော၊ ခေတ်မီသော၊ သဘောထားကြီးသော၊ ကမ္ဘာကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ချင်သော စာဖတ်သူကို အဆင့်မြင့်စာဖတ်သူဟု အကျွန်ုပ်သတ်မှတ်ပါသည်။"
စာရေးသူတိုင်းသည် ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးနေသူများ ဖြစ်သောကြောင့် တာဝန် အလွန်ကြီးပါသည်။
ထိုတာဝန်ကို ကျွန်မတို့သည် ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့် ရင်းရမည်။
ထိုဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ကျွန်မတို့ ဖတ်သော စာအုပ်များက ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
ရွှေဂုဏ် ငွေဂုဏ်၊ ရာထူးဂုဏ်သည်၊
သူက ငြူစူ မကြည်ဖြူ၍
သူက ငြူစူ မကြည်ဖြူလည်း၊
( ဇော်ဂျီ )
ဘလော့ဂ် ဘလော့ဂ် (1)
လာလည်ကြသောဘလော့ဂါမောင်နှမများ၊ သူငယ်ချင်းများသို့ (1)
နိုဝင်ဘာကို တကျော့ ပြန်ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ...။ အချိန်တွေက အကုန်မြန်လွယ်လွန်းလှသည်ဟု သူမ ထင်မိသည် ။ သို့ပေမယ့် နှစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ တစ်ခုေ...
အသားမကျမှုတွေနဲ့ နေသားကျရင်း အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ အဆင်ပြေရင်း မမျှော်လင့်တာတွေကို မျှော်လင့်ရင်း သူစိမ်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရင်း အေးစက်မှုတွေန...
(ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်မိတဲ့သူတွေကတော့ ကျွန်မကို တော်တော်လေးကို နှာခေါင်းရှုံ့ပြီး မျက်စိထဲမှာ ခရော့စ် ဖြစ်သွားကြမလားတော့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်...
“ဆရာမ.... ဆရာမ.... “မော်” ဆိုတဲ့ စာလုံးမှာပါတဲ့ (ရေးချရှေ့ထိုး) က ဒီလိုမျိုး -ာ် ၊ “ပေါ်” ဆိုတဲ့စာလုံးမှာပါတဲ့ (ရေးချရှေ့ထိုး) က ဒီလိုမ...
မရည်ရွယ်ဘဲ အတိတ်နယ်ထဲ ခြေချမိတော့ သတိရစိတ်တို့က အုံးအုံးကျက်ကျက် ထဖြစ်ကုန်တယ်။ ။ ကယောင်ကတမ်းနဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ထအဖွင့် လွင့်လာတဲ့ ...
ပါရမီဒီပနီ အနှစ်ချုပ် - ၃ - (. . . . .မှ အဆက်) အမေး - ၅။ သဗ္ဗညုဗောဓိဆု၊ ပစ္စေကဗောဓိဆု အစရှိသော ဆုတစ်မျိုးမျိုးကို တောင်းကုန်သော အလောင်းအလျာတို့သည် ဗျာဒိတ်ရသောအခါမှ စ၍ ပါရမီတို့ကို ဖြည...
မိုမိုတို့အတွက် ရင်တွင်းစကားသံလှုပ်ရှားမှု စက္ကူဆင်ရုပ် ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းဝင် - ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင် မြန်မာ့ ဆင်ရုပ် (WWF-Myanmar) မြန်မာနိုင်င်မှာ ဆင်တွေ တရားမ၀င် ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကို တားဆီးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာ ဖန်တီးခဲ...
အာဇာနည်မိခင် - နှစ်. . လ . . နာရီ အခါရာသီရွေ့ပေမယ့် အာဇာနည်နေ့ကိုဖြင့် မမေ့သင့်ပါသလေ . . . . မြန်မာလူမျိုးမှန်လျှင် (လူတချို့တော့ဖြင့် ပါချင်မှပါပါလိမ့်မည်) သည်ကနေ့ သည်...
ညမိုးသည်း..... - ကျွန်မ မျက်နှာပေါ်မှာ မိုးရေတွေနဲ့မျက်ရည်ပူတွေ ရောယှက်လို့ ..။ မိုးစက်မိုးပေါက်တွေလာရာ မိုးကောင်းကင်ကို မျက်နှာမူထားလို့လား... ကျွန်မပါးပြင်ပေါ်ကို မိုးစက...
မိုးနဲ့ စတဲ့ နံနက်ခင်း - . နံနက်ခင်း အစပျိုးမှာ မိုးက အငြိုးနဲ့ ရွာတယ်၊ ပိတောက်တွေ အခါခါပွင့်သလို အရောင်လွင့် ရနံ့ပြယ်သွားတဲ့ စံပယ်လေးတွေက ဆေးဆိုးခံကြရ ... ။ . ပြိုလဲလုလု သစ်ပင်အ...
အရှေ့ကန်းရိုးတန်းက ကျွန်းကလေး - ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆို အပန်းဖြေကျွန်း တစ်ကျွန်းပါလာရင် စိမ်းပြာရောင်သန်းနေတဲ့ ပင်လယ်ရေရယ်၊ နုလွဖြူဖွေးနေတဲ့ သဲပြင်နဲ့ အစီအရီအပြိုင်းအရိုင်း ပေါက်နေတ...
တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယ ၂ နိုင်ငံစလုံးအနေနဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ အရ ဦးဆောင်မှုပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့် ပါတယ်။ ဒါဟာ စီးပွါးရေဦးဆောင်မှုသက်သက်မဟုတ်သလို နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှု သက်သက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကနေ့လိုအချိန်မှာ လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာအရ ဦးဆောင်မှုကို ပြဖို့ ဘယ်တုန်းကနဲ့မှ မတူအောင်ကို လိုအပ်နေတာပါ” - https://burmese.voanews.com/a/rohingya-myanmar-un-adama-dieng/4297744.html မြန်မာ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုတွေ မြန်မာကျူးလွန်နေကြောင်း ကုလ ထောက်ပြ 14 မတ်၊ 2018ေ...
ဂစ္ဆပ သားတို့ ပျော်ရာမြေ
ဒိုင်းကျီရှိဇီ ရီရှိဇီ ဘားပူရှိဇီ ဆန်ရှိဇီ - သံလွင်မြစ်မှာစီးရေသွီးညှီ မခြောက်ခမ်းနိုင်သိပိုင် စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်းတစ်ဝိုက်လည်း အနာကိုဆီးထည့်နီကတ်ရတုန်း ခါကာဘိုရာဇီမှာအေအချိန်ရေ ဗန်ဒါတိပွင့်ချိန်လား.......
AUNG PYI SONE AYE (Buddhism) အောင်ပြည့်စုံအေး
ပုဗ္ဗဏှသုတ် - ပုဗ္ဗဏှသုတ်၁။ ယံ ဒုန္နိမိတ္တံ အ၀မင်္ဂလဉ္စ၊ ယော စာ မနာပေါ သကုဏဿ သဒ္ဒေါ။ ပါပဂ္ဂဟော ဒုဿုပိနံ အကန္တံ၊ ဗုဒ္ဓါနုဘာဝေန ၀ိနသ မေန္တု။ ၂။ ယံ ဒုန္နိမိတ္တံ အ၀မင်္ဂလဉ္စ၊ ယော စာ မနာပေါ သ...
အာဏာ - ရာဇ၀င်ကို တွန်းလန်ဖို့ ငါအာဏာမသိမ်းဘူး ပုံပြင်တွေကို ပြုပြင်ဖို့ ငါအာဏာမသိမ်းဘူး သမိုင်းကို အသွင်ပြောင်းဖို့ ငါအာဏာမသိမ်းဘူး သေခြင်းတရား နဲ့ ရှင်သန်ခြင်း...
ဖောက် ........... - မျိုးစစ်မှန်စွာ ပန်းမဟာတုို့ ကြမ္မာငင်ရောက် အုတ်ကြားပေါက်လည်း မကြောက်အလျဉ်း သူ ဖောက်ထွင်းသည် အလင်းပန်းများ ပွင့်စေဖုို့။
A post from Popular News Journal - သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကို မယုံကြည်တော့သဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်နိုင်ရေး ကူညီကြရန် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်စုံ စမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဒေသခံများ တောင...
Hands On & Review Asus Zenfone3Deluxe - Ini IFA 2016 dan kami punya kesempatan untuk pergi tangan-on dengan unggulan Asus baru. handset logam ini adalah bagian dari trio handset Asus mendatang, m...
Giveaway: IM-Magic Partition Resizer Pro Giveaway Special Download FREE - Today, iVoicesoft and IM-Magic give youaHOT gift for the HOT summer, IM-Magic Partition Resizer Pro Special Giveaway. This giveaway is unlimited nimber o...
- "Colour Plate for MCCB" . ညီတဦးက oral မေးခွန်းအတွက်...chat box မှတဆင့်... preferential trip အကြောင်းမေးလာသမို့... ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ post တွေထဲမှ..."Colour Plate f...
Myanmar Small Businesses Development
လူမှနျနရောမှနျခနျ့ထားရေးနဲ့ မွနျမာ့စီးပှားရေး - ယခုလကျရှိလုပျနတေဲ့ ကြောငျးမှာ သငျကွားရေး၊ သုတသေနလုပျငနျးတှအေပွငျ MBA သငျတနျးမှာလဲ Deputy-director အနနေဲ့ ကြောငျးသားရေးရာတှကေူညီလုပျကိုငျပေးနရေတဲ့အတှကျ ဆောင...
အဖွားတို့ငယ်ငယ်က - အဖွား နှစ်တရာပြည့် သူငယ်ငယ်က အကြောင်းလေးတွေ ရေးစေချင်တယ် ဆိုတော့ သူနဲ့က အသက်ကြီးမှ သိတာလေ။ သူ အသက် ၇ဝ လောက်မှ ဒီက လူဖြစ်ခါစ ဒီနောက်ပိုင်း အနှစ် ၂ဝ လောက်ပဲ ...
ရွှေကရင် မြင်ရဲ့လား -
Loker PT CIMB Sun Life di Jakarta Agustus 2015 - Loker PT CIMB Sun Life di Jakarta Agustus 2015 - Bagi anda yang baru saja menyelesaikan pendidikan, kami sarankan untuk tidak melewati Informasi Loker Agus...
SANITARI KONDUKTIVITI METER HE-960HI | JUAL CONDUCTIVITY METER | 081322599149 - *SANITARI KONDUKTIVITI METER HE-960HI | JUAL CONDUCTIVITY METER | 081322599149 * Untuk info dan pemesanan hubungi : 022-7239019 | 0821 4000 2080 | 085...
- အင်း ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်နော်...
kklatt ယောသား's invitation is awaiting your response - [image: LinkedIn] *kklatt ယောသား* would like to connect on LinkedIn. How would you like to respond? kklatt ယောသား O...
လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့  အဓိပ္ပါယ် (၂) - လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့  အဓိပ္ပါယ် မွေးဖွားခြင်းနဲ့စခဲ့တဲ့ ငါဟာ ... တစ်နေ့နေ့မှာ ... သေခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ သေချာတယ် ... မသေချာခြင်းတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ လောကကြ...
အမှတ်တရ ကုသိုလ်တခု - နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ။ နေမကောင်း ၊ နက်မကောင်းလို့လိုင်းမဝင်ရ ၊ ဖဘ အိမ်လည်မထွက်ဖြစ်တာ ၂ရက်ရှိသွားပြီ။ နှစ်ဟောင်းကုန်ခါနီး ပြုခဲ့တဲ့ ဒါနကုသိ...
I want to share all burmese buddhism. -
ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောဖိတ်စာကဒ်ဒီဇိုင်း... - ကိုယ်တိုင်handmadeဖိတ်စာဒီဇိုင်းလုပ်ချင်ရင်အခုလိုလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေideasအသစ်အဆန်းရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Myanmar Japan Friendship (Facebook) - https://www.facebook.com/MJfriendship ဒီစာမျက်နှာလေးမှာ ဂျပန်နှင့်မြန်မာ သိသင့်တာလေးတွေအချင်းချင်းမျှဝေဖို့ရာ မိတ်ဆွေအချို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပြီး ဖန်တီးထားပ...
နှစ်မချို့ခင် ရန်ကုန်ကို လွမ်းလို့.... - နာမည်ကြီး ဘလော့ဂါတွေလည်း သူတို့ဘလော့ဂ်တွေမှာ ပို့စ်အသစ်မတင်ဖြစ်တာ တချို့ဆို နှစ်တောင်ချို့နေပြီ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လဲ နှစ်မချို့ခင် အသစ်လေး တင်ချင်စိတ...
လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း အပေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာ အမြင် - ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်း ဆိုသည်မှာ လူတဦးတယောက်တည်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်တရပ် မဟုတ်ပေ။ လက်ထပ်ခြင်းဆိုသည်...
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်..ငြင်းဆိုခြင်း - တင်းတင်းစေ့ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးက အမြဲတမ်းပဲ နှုတ်ဆိတ်နေတတ်တာ အခုထိပဲ။ ဒါပေမဲ့...ငါသိနေတယ်။ အညိုရောင်ချယ်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေက သံဃောဇဉ်ဖြတ်မရဘူးဆိုတာ ညွှန်းနေတယ်။ ကျစ...
- ‘’ မြန်မာပြည်ကအာဇာနည်’’ ကိုယ့်အမိမြေအရေးပေမို့ ------- ဥပေက္ခာပြုကာမနေသာ အမေဟာ စွ...
ခေတ္တခဏ သန္တာအောင် မှတ်တမ်းမှတ်စု
ပိုက်ဆံမရှိသော်လည်း လှူဒါန်းနိုင်သော အလှူ (၇) မျိုး - အခါတစ်ပါး၌ လူငယ်တစ်ယောက်သည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ “အကျွန်ုပ်သည် မည်သည့်အရာကိုပဲလုပ်လုပ်မအောင်မမြင် ဖြစ်နေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် မအောင်မမြင် ဖြစ်ပါသနည်း...
စင်ကာပူ မှ အိမ်ပိုင်ရှင်များ အိမ်ခန်းပြန်ငှားရန် သိသင့်သည့် အချက်များ - စင်ကာပူမှာ အိမ်ဝယ်ပြီးတဲ့လူတိုင်းလိုလို အိမ်ခန်းတွေကို ပြန်ငှားကြတာ ထုံးစံလိုလိုပါဘဲ။ အဲဒီလိုပြန်ငှားတဲ့ အခါ စင်ကာပူ အိုးအိမ်ဖွံဖြိုးတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (HD...
လန့်နိုးခြင်း - ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတော့မှ အိပ်မက်တွေက ပိုလတ်ဆတ်လာတယ် "တစ်နေ့နေ့မှာ"ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို "ဘယ်တော့မှ"လို့ ပြောင်းလဲ နားလည်လိုက်ရပြီ ပွဲပြီးမှ နိုးလာတဲ့သူလို ဘာမှန...
သူငယ်ချင်းသို့ - ပြန်ပြီလား သူငယ်ချင်း.... ခရီးပြင်းနှင်ခြင်းသီဝရီမှာ အပြန်ဟာ အစဖြစ်နိုင်သလို အလာဟာလည်း အစဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြန်ပြီလား သူငယ်ချင်း.... ချစ်ခြင်းဖွဲ့သီဝရီမှာ ကမ္ဘာ...
သူ့လက်ထဲက လိပ်ပြာတောင်ပံတစ်စ - ညို့မှိုင်းလာတဲ့ တိမ်တစ်စကိုတွယ် လေပြည်တချက်အသယ်နဲ့ သူ့ယာခင်းအစပ်က သစ်လုံးအိမ်တံစက်မြိတ်အောက် ကျနော် ရောက်ခဲ့တယ်။ ခြေသံဖွဖွ အသာမလျက် မျက်ဝန်းကစား အသာရှာကြည်...
ရွေးကောက်ပွဲ - ဒီနိုင်ငံဟာ၁၉၆၆ခုနှစ်မှာဗြိတိသျှကိုလိုနီအဖြစ်မှလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာပါ။ ၅နှစ်တစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးအရပ်သားအစိုးရကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၆မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်ြး...
ဖဦး​ထုပျ -ွမနျမာ အက်ခရာတှငျ ဗညျြး​ (၃၃) လုံး​ဟူ၍ ရှိပါသညျ။ အဆိုပါ ဗဉျြး​ (၃၃) လုံး​အနကျ ဖဦး​ထုပျ (ဖ) ၏ ​နေရာသညျ နံပါတျ ဘယျ​လောကျမှာ ရှိသလဲ ဆိုလြှငျ​တော့​ ရုတျတရကျေ...
အပြောင်းအလဲ လေကြောင်းထဲဝယ် - အပြောင်းအလဲ လေတွေ တိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာ တချို့က ရှောင်ရှားဖို့ ကြိုးစားကြတယ် တချို့ကတော့ လေဒဏ် ရေဒဏ်ကို ခံနိုင်မဲ့ အဆောက်အအုံ လေရဟတ် လိုဟာမျိုးကြီးတွေ ကို...
Software And Services Great Product 24 - Get Paid For Your Photos Your Just A Few Clicks Away From Your Photos Paying You! For Non Photographer And Pro Alike. Top Dollar For Your Pics. Flash Game ...
Khin Maung Chin
မခမ်းနားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု - *ကမ္ဘာဦးစကတည်းကတည်ရှိခဲ့တယ်နောင်ကမ္ဘာပျက်သုဉ်းချိန်ထိရှိနေလိမ့်မယ်လူသားတိုင်းလည်းချစ်ဖူးကြတယ်ငါနဲ့မင်းလည်းလူသားတွေပဲလေဒါပေမယ့်အချစ်ရယ်..............* *...
" ကဗျာရေးတဲ့ကျောက်စာ " ( မွေးနေ့ အမှတ်တရ ) - ရနံ့ တွေရတဲ့ တောတစ်အုပ်မှာ ငါက " ကေသရာဇာ " ဖြစ်ချင်တာ ဒါပေမဲ့ . . . ဘယ်လေညှုင်းနုနုမှဖမ်းစားဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူး . . . . . နတ်ဆေးလုံးစား စလွယ်ဖွားမဟုတ်ပေမဲ့...
သမိုင်းဝင် တော်လှန်ရေး ကူးစက်မှုများနှင့် လူထုအောင်ပွဲ - သိန်းနိုင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်များတွင် တော်လှန်လှုပ်ရှားမှုများမှာ ဗိုင်းရက်စ်ပိုးကဲ့သို့ပင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လျင်လျင်မြန်မြန် ကူးစက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်...
အင်းလေး အင်းပေါခုံ ရေယဉ်မယ်များ မှတ်တမ်း (၃) - အင်းပေါခုံရွာတွင် ကိုယ့်ရွာဆီသို့ ဖောင်တော်ဦးဘုရား ကြွရောက်လာမယ့် အကြိုနေ့၌ ရွာသူရွာသားလူငယ်များက ဘုရားဖောင်တော်ကို ကြို မည့် ဆွဲလှေကြီးများကို ငြမ်းခ...
သူနဲ့ ဝေးခဲ့တုန်းက - ကျွန်မမေ့ထားနိုင်ပြီဟုထင်သော အချိန်အပိုင်းအခြားတခုပြည့်သွားပြီ။ကျွန်မရင်ထဲက ခံစားချက်တွေလည်း အနည်ထိုင်ကုန်ပြီဟု ယူဆထားမိသည်။တကယ်တမ်းတော့ ထိုသို့မဟုတ်ပေ။ကျွ...
ရည်ရွယ်ချက် - ------------------------------ ရည်ရွယ်ချက် ဆိုပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရေးထားပေမဲ့ တကယ် ဖြစ်စေချင်တာကတော့ တစ်နေရာတည်းမှာ မြန်မာ ဘလော့ဂါတွေ ရေးသမျှ ၊ တင်...
အပြုံးတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ကြမယ်.. - တစ်နဲ့တစ်ပေါင်းရင် နှစ်ရတာဟုတ်ပေမဲ့.. ရေစက်လေးတွေပေါင်းကြည့်တော့ရေတစ်စက်နဲ့ရေတစ်စက်ပေါင်းတဲ့ အခါမှာတော့.. နှစ်စက်မရဘူး။ ရေတစ်စက်ပဲရတယ်နော်။ အဲ့ဒီလိုပဲ အယူ...
ပိုးစုန်းကြူးရဲ့ သဲ့သဲ့ရီသံ - ကြည့်လိုက်စမ်း ခရေ... ငါတို့ ရဲ့ကမ္ဘာတခြမ်းအပေါ် ကြည်လင်တဲ့အလင်းဓါတ်တွေ ယုယစွာ”သာ”ချပေးနေတဲ့ ပြည့်လုဆဲဆဲ”လ”မင်းကြီးရဲ့ အောက် တဖွဲဖွဲ တလွှင့်လွှင့် နူးနူးညံ့ညံ့...
ဒီ ဒီဇင်ဘာ - ခိုက်ခိုက်တုန်အောင်အေးတဲ့ ဒီဇင်ဘာ၊ နှင်းဖွဲလေးတွေ ဝေဖြာလို့၊ လွမ်းဖို့ကောင်းတယ် ဆိုမလား၊ အတွေးများက ပြည့်နက်လို့နေပ၊ ယိမ်းနွဲ့နွဲ့ အကလေးတွေနဲ့၊ မြစိမ်းရောင...
ထူးဆန်းထွေလာ ဖတ်စရာ - ဖတ်မိတဲ့စာတွေထဲက မှတ်မိတဲ့ ထူးထွေ ဆန်းပြားတာလေးတွေစုစည်းမှုပါ.နောက်ထပ်လဲ ရှိသေးတယ်နော်.. သိတာရှိလဲ ဝေမျှပေးပါအုံး ၁။ တစ်နေ့တစ်နေ့ကို အီးမေးလ် ဘီလျံပေါင်း ၁၆၀...
အတိုက်အခိုက် - အတိုက်အခိုက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြတာပဲလေနော့ ။ ကိုယ်ကမှန်မှန် နေပါလျက် ကိုယ့်ကို ပေါ်တင်ကြီး သိသိသာသာ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုန့် ပြန်မလဲ? အဲဒီအချက်ကို...
လေ့လာမှတ်သား ဖတ်စရာမှတ်စရာစာအုပ်များ - 1. [image: http://www.georgiagokarts.com/images/pdf_icon_v9gv.png] ဒီမိုကရေစီ သင်ခန်းစာများ - လွင်အောင်စိုး 2. [image: http://www.georgiago...
ဘယ်သူကဘာပြောလို့လဲ - ဘယ်သူကဘာပြောလို့လဲ တကယ်တော့ ဒီနေ့ဟာလပြည့်နေ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း စိတ်ကူးနဲ့တောင်ပေါ်တက်ဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။ စေတီခြေရင်းမှာ တကိုယ်တည်းစခန်းသွင်း ခပ်ငယ်ငယ်ကအတွေ...
- "ဘလော့ဂ်ဂါစောင့် နတ်မင်း အတွက်" လောကမှာ အမှားကင်းသူဟူ၍မရှိပါ။အမှားနဲ့ကင်းအောင် ရှင်းအောင်နေနိုင်သူလည်းမရှိပါ။ထိုသို့သောကြောင့် ကျွန်တော်၏ဘလေ့ာဂ်ထဲတွင် အ...
တိတ်တ်ိတ်လေး - ဒီမျက်ဝန်းနဲ့ ဆုံလိုက်တိုင်း ဒိန်းကနဲ မြည်တတ်တဲ့ ကျမရဲ့ ရင်ခုန်သံ ဖျက်ကနဲ ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ အသဲတခါး ချစ်ခြင်းတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ သတ္တိတွေက ဘရ်ရရ်မှန်း မသိ ထိတ်...
စွေသောမိုးနှင့်ကြွေသောပိတောက် (၁) - ဘ၀များ၏တစိတ်တဒေသထဲ၌ အပူအပင်အနည်းပါးဆုံးအချိန်သည် ကျောင်းသားဘ၀ဖြစ်သည်။ အေးချမ်းပျော်မွေ့စွာ အများစုနည်းတူ မိုးရည်လှိုင်နှင့်ပပနွယ်တို့တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းရောက်...
Eggplant Tomato "Stuffing" Bake - Hold the phone... stop what you're doing... and try this. I'm not going to lie, when my Weight Watchers leader Julie was raving about this recipe yesterd...
ချက်စားခဲ့တာလေးတွေ - အောက်တိုဘာတစ်လလုံး လူမမာဖြစ်နေတာ လကုန်ခါနီးလောက်မှနေကောင်းသွားပါတယ်။ အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်။ဒေါ်ဦးကိုလဲခွှင့်လွှတ်ပါ။လဆန်းပိုင်း မြောက်ဦးဆရာတော်ဘုရားရဲ.တရား စ...
ကြက်သားနဲ့မုန်လာဥ အစပ်ချက် - လိုအပ်သမျှ ကြက်သား မုန်လာဥ ငရုတ်သီးစိမ်း ငပိစိမ်းစား နနွင်းမှုန့် ကြက်သွန်နီ ဆီ နံနံပင် ကြက်သားတွေကို အနေတော်အတုံးကလေးတွေတုံးပြီး ဆားနနွင်းနယ်ထားပါ.. မုန်...